FTTH Optical distribution faladiany ODP-02
FTTH fibre optic faladiany, antsoina koa hoe fibre optic teboka roa seranan-tsambo, izay mamela ny fametrahana ny iray na roa fibre optic adapters, miorina amin'ny SC karazana fibre Optical.
Ny ODP-02M manana metaly tendrombohitra noho ny famahanana Patch fibre optic tady, na tariby, izay manamora ny fametrahana dingana. Fibre optic tariby dia ho mafy orina ao amin'ny mitete tariby faladiany.
FTTH faceplate dia vita amin'ny plastika ABS. Indoor rindrina-tsoavaly fametrahana karazana atao amin'ny 2 nandrisika screws ny 25 * 4 habeny.
Ny refin'ny mpampiasa farany Optical boaty dia 86 * 86 * 22 dia ampy ho sahaza malalaka fibre tady hiondrika nipoaka No splice lovia ilaina, fahazavana sy ankasitrahana eo fahitana, dia manana hery mekanika fiarovana.
Manome maimaim-poana ny fidirana mpampiasa na ny fidirana tahirin-kevitra mifototra amin'ny teknolojia FTTH
Technical fepetra arahana:
Ny Optical fibre telegrama, Patch tady na telegrama pigtails torohevitra amin'ny rindrina Optical fivoahan'ny avy ambany. Avy eo, tariby mitondra avy any amin'ny faran'ny fampijanonana boaty mpampiasa ny fitaovana mavitrika.
Jera manolotra ny FTTH fibre optic famaranana vata, miaraka ilaina FTTH sy Pon Accessories: Fibre Optic Pigtails, Fibre Optic adaptatera , Fiarovana Sleeve, Fibre Optic Patch Tady, Fibre Optic Splice Mikatona Mitete tariby clamps, Down hitarika clamps, pole fononteny mahitsy, tsato-kazo asio fehy, Anchoring sy Suspension clamps, tariby malaina fitehirizana, sns atolotsika vita indrindra isan-karazany ny matoantenin'ny atao Optical tambajotra Accessories.
Previous: Fibre Optic Distribution Box, 16 Cores, FODB-16X
Manaraka: Mafy fampiatoana SGR
fibre optic tariby
fibre optic faladiany
FTTH fibre optic faladiany
FTTH optic faladiany
optic distribution faladia
fibre optic teboka
Optical distribution faladiany ODP-02
Fibre Optic adaptatera SC
FTTH tariby clamp TRONDRO-2